चार स्टार खेलाडी जसले विश्वकप जितेनन् ! - Paschimnepal.com
चार स्टार खेलाडी जसले विश्वकप जितेनन् !
एजेन्सी । फुटबल र क्रिकेट खेलाडीका केही समानता छन् । जसले विश्व खेलकुदमा आफ्नो नाम स्थापित गर्छन् । नाम कमाउछन्, दाम बटुल्छन् । तर आफ्नो देशका लागि विश्वकप जित्न सक्दैनन् ।
समकालिन फुटबलमा लियोनल मेस्सी र रोनाल्डो विश्वकपका अभागी खेलाडी मानिन्छन् । आधुनिक फुटबलका दुई सुपरस्टार फुटबलरले देशका लागि विश्वकप जित्न सकेनन्, सकेका छैनन् ।
त्यही नियति विश्व क्रिकेटका केही सुपरस्टार क्रिकेटरले ब्यहोरे । जसले एकदिवसीय विश्वकपको उपाधि उचाल्न सकेनन् । त्यही चार स्टार अभागी क्रिकेटरको सुचि प्रस्तुत गर्दैछौ ।
१. कुमार संगाकारा
श्रीलंकाका लिजेण्ड विकेटकिपर ब्याट्सम्यान कुमार संगाकाराले २२ बर्षको उमेरमा सन् २००० मा एक दिवसीय खेलमा डेब्यु गरेका थिए ।
१५ बर्ष एक दिवसीय क्रिकेटमा रमाएका उनले ४ सय ४ खेलमा १४ हजार २ सय ३२ रन बनाए । उनले श्रीलंका टोलीलाई १ सय ५ एक दिवसीय खेलमा कप्तानी गरे । तर विश्वकप जित्न सकेनन् ।
सन् २०११ को विश्वकपमा संगाकाराको कप्तानीमा श्रीलंका फाइनल पुगेको थियो । व्यक्तिगततर्फ ९ खेलमा ४ सय ६५ रन प्रहार गरेका उनी प्रतियोगिताका सर्वाधिक रन बनाउने तेस्रो खेलाडी बनेका थिए । सन् २०१४ को टी–ट्वान्टी विश्वकप उपाधि जिताएका उनले एक दिवसीय विश्वकपकाे उपाधि चुम्न सकेनन् ।
२. राहुल द्रविड
निकै डिफेन्सिभ क्रिकेट खेल्ने भारतका राहुल द्रविडले धेरै पटक एक्लैले खेल जिताएका रेकर्डहरु छन् । सन् १९९६ मा डेब्यु गरेका उनी टेस्ट क्रिकेटमा निकै सफल खेलाडी साबित भए ।
सन् १९९६ को विश्वकपमा ८ खेलमा ४ सय ६१ रन बनाएका उनी प्रतियोगिताको सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका थिए । सन् २००३ को विश्वकपमा समेत सफल खेलाडी रहेका उनले फाइनल खेल जिताउन असफल रहे । अस्ट्रेलियाबिरुद्द सो खेलमा भारत १ सय २५ रनले पराजित भएको थियो ।
सन् २००७ को विश्वकपमा उनले भारतीय टिमको कप्तानी गरे । सो विश्वकपमा उनले ३ सय १८ रन बनाएका थिए । उनले विकेटकिपरको रुपमा १६ जनालाई आउट गरेका थिए । सो विश्वकपमा भारत समुह चरणबाट बाहिरिएको थियो ।
सन् २०११ मा सिमित ओभरको क्रिकेटबाट सन्यास लिएका उनले एक दिवसीय खेलमा १० हजार ८ सय ८९ रन बनाएका छन् । सन्यासपछि उनलाई भारतीय यु–१९ टोलीको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिईएको थियो ।
३. एबी डी विभीलर्स
दक्षिण अफ्रिकाका लिजेण्ड क्रिकेटर एबी डी विभीलर्स ब्याटिङ मात्र नभएर फिल्डिङमा समेत उत्कृष्ट मानिन्छन् । सन् २००४ मा डेब्यु गरेका उनले छोटो समयमा आफुलाई प्रमाणित गरे । तर सन् २००७ को विश्वकपका ४ खेलमा खाता नखोली आउट भए ।
तर सन् २०११ को विश्वकपमा डी विभीलर्सले लगातार २ शतक प्रहार गर्दै विश्वकपमा २ खेलमा २ शतक प्रहार गर्ने दक्षिण अफ्रिकी पहिलो खेलाडी बनेका थिए । सो प्रतियोगितामा उनले १ सय ३६ दशमलब ७३ को औसतमा समापन गरेका थिए, जुन कुनै पनि खेलाडीको भन्दा उच्च औसत हो ।
मिस्टर ३६० उपनामले परिचित डी विभीलर्सले सन् २०१५ को विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्डबिरुद्दको खेल जोगाउन सकेनन् ।
४. शौरभ गांगुली
भारतमा दादा नामले परिचित शौरभ गांगुली क्रिकेट जगतका एक लिजेण्ड हुन् । सन् १९९२ मा डेब्यु गरेका उनले पहिलो दुई खेलमा शतक प्रहार गर्दै डेब्युको दुई खेलमा शतक प्रहार गर्ने विश्वका तेस्रो खेलाडी बनेका थिए ।
सन् १९९९ को विश्वकपमा श्रीलंकाबिरुद्द १ सय ८३ रन बनाउँदै उनी भारतीय खेलाडी मध्य विश्वकपको एक इनिङ्समा सर्वाधिक रन बनाउने एक मात्र खेलाडी बने ।
सन् २००३ को विश्वकपमा उनको कप्तानीमा भारतले फाइनलको यात्रा गरेको थियो । ब्यक्तिगततर्फ प्रतियोगितामा उनले ३ शतक सहित ४ सय ६५ रन जोडेका थिए तर उपाधि उचाल्न भने असफल रहे । गांगुली क्रिकेट इतिहासमा एक निडर कप्तानको रुपमा परिचित छन् ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ १४, २०७६ 6:29:49 PM
Prevवीरेन्द्रनगरमा टेलिकमको फाइबर टू होम सेवा सुरु
Nextभोलि स्थानीय तहमा नौ हजार कर्मचारीको विज्ञापन गरिँदै